Isipho esihle sikaKhisimusi nonyaka omusha wezingane ezisuka eBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd.
I-Beijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd inezipho eziningi ezinhle zikaKhisimusi nonyaka omusha wezinsana, namuhla sabelana ngokulandela izinto ezi-4 ezikulungele, ezithengiwe. 1. 4 in1 function cube 124 multifunctional pearl labyrinth labyrinth Abakus puzzle for izingane ezincane. 2.Ujantshi Wokhuni Wa ...
Izikuta ezi-5 ezintsha ezi-1 ezivela eBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd.
Lesi sikuta esisha ku-1 sivela eBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd. Isikuta sinezindlela ezine zokulayisha, ezifanele izingane ezineminyaka ehlukene: Isigaba sokuqala: Abazali bezingane bangasebenzisa isigxobo sangemuva ukuphusha ingane ukuba ishelele ! Hlala kuso uzwe ubumnandi bokudlala ndawonye ....
Ibhodi elisha lokudweba elivela eBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd.
Leli bhodi lokudweba yiBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd enelungelo lobunikazi elisha lokudweba ibhodi elinemisebenzi emnandi, yokudala neyokuqonda. Ibhodi yokudweba ejwayelekile ehlukile emakethe. Ngasikhathi sinye, inemisebenzi yokudweba emaceleni omabili, umdlalo wobuhlalu, incwadi ...
U-Beijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd ukumema ngobuqotho ukuthi uvakashele i-China Toy Expo
Amakhasimende nabangane abathandekayo, uBeijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd ukumema ngobuqotho ukuthi uvakashele i-China Toy Expo, ezobanjelwa eShanghai New International Expo Center kusukela ngomhla ka-19 kuya ku-21, Okthoba 2021, inombolo yethu yamadokodo ingu-N6F20. Sizokhombisa ama-trampolines ethu, amabhodi okudweba, ama-scoo ...
I-Asian Children's Cycling Society — Ibhalansi yebhayisikili
I-Asian Children's Cycling Society, ikuthathe uvule ukunyakaza kwebhayisikili lezingane elinamandla amakhulu. Eminyakeni yamuva nje, umdlalo wokulinganisa amabhayisikili ezingane usuthandwa kakhulu phakathi kwabazali nezingane. Ividiyo yokuncintisana kwebhayisikili yokuncintisana nayo ibe yi-flo ...
Ukulinganisa kulinde wena emhlabeni wonke ~
Ukuthola ulinde wena! Ngemuva kweminyaka emine yentuthuko, i-Ealing iye yanda isuka eBeijing yaya emhlabeni. Manje sinezindlunkulu zeBeijing, inkampani ephethwe yiHangzhou, inkampani ephethwe yiGuangzhou, inkampani ephethwe nguShantou, inkampani yaseMelika, yaseJalimane neyaseNdiya, izimboni ezimbili zokuhlanganyela, kanye ne-thre ...
Imikhiqizo emisha iyeza！
Imikhiqizo emisha iyeza company Inkampani yethu muva nje yaklama ama-easels amasha amahlanu, amabili awo afake izicelo zamalungelo obunikazi, futhi azobuyekezwa muva nje! Ilinde uphenyo lwakho nganoma yisiphi isikhathi! Incazelo yomkhiqizo: Umklamo wamehlo amancane ukugqamisa kwaleli bhodi lokudweba; kube ...
Ealing —- Mayelana NATHI
I-Ealing yasungulwa ngoFebhuwari 2017. Le nkampani izibandakanye nebhizinisi lokuthekelisa lomama baseChina nezinsana emakethe yomhlaba. Iminyaka emithathu nje kuphela, inkampani isebenzise ukuhumusha okujulile kwesidingo sabathengi bemakethe ebhekiswe kubo, ukukhethwa kobungcweti, ukuklanywa, nokwenza kabusha ...
Ukwenziwa ngcono kwezithiyo zobuchwepheshe kwandisa izindleko zomkhiqizo
Njengemikhumbi yomoya yemithethonqubo yezobuchwepheshe yomhlaba, i-European Union ibilokhu ihamba phambili ezinkingeni zobuchwepheshe ezihlobene nemikhiqizo yezingane. Isibonelo, indinganiso yamathoyizi eyaziwa ngokuthi "eqine kakhulu emlandweni" isetshenziswe ngokusemthethweni, kanye nomthelela eChina ...
Yini okufanele siyinake lapho sithumela imikhiqizo yezingane?
I-China ngumthengisi omkhulu, futhi inani lezimpahla zezimpahla ezithunyelwa ngaphandle zezingane liyanda. Ngakho-ke ngokwezidingo zemakethe, izindinganiso zokuthekelisa izimpahla zezingane emazweni ahlukile zihlukile. Ngasikhathi sinye, ngokulawulwa kwekhwalithi nokuphepha kwemikhiqizo yamathoyizi, umehluko ...
Ngokuzimisela vula imakethe, wandise ngenkuthalo ukungeniswa, futhi ukhuthaze ngamandla ukuqhutshwa kokuhweba
I-Global novel coronavirus pneumonia igadla ukuhwebelana kwamazwe omhlaba, ibhekene nobunzima, iChina iyaphikelela ekuthuthukiseni imvelo yebhizinisi ethekwini, ikhuthaza ngamandla ukuqhutshwa kokuhweba, ivule imakethe ngenkuthalo, yandisa ngenkuthalo ukungeniswa kwangaphakathi, futhi ihlale ihlakulela izinzuzo ezintsha kuhwebo lwangaphandle d ...